Abasizi basematekisini bakhala ngokungaphathwa kahle | News24
Abasizi basematekisini bakhala ngokungaphathwa kahle
ABASIZI babashayeli bamatekisi ahambela endaweni yase-Azalea kanye naseMbali Unit 18 bakhala ngokungaphathwa kahle ngabanikazi bamatekisi.
Laba basizi badinwe bavala umgwaqo kule ndawo ngoMsombuluko kwaphazamiseka ukuhamba kwamatekisi.
UMnu Nkulu Cele nongomunye wabasizi bamatekisi uthe into abayifunayo ukuhlonishwa baphathwe njengabo bonke abasebenzi.
Uthe lokhu kulandela ngemuva kokuba kushone omunye uzakwabo ngesonto eledlule esemsebenzini kodwa abanikazi bamatekisi bangafuna ukwelula isandla emalungiselelweni omngcwabo. Uthe uzakwabo washayiswa imoto washona ngasenxanxatheleni yezitolo i-Edendale Mall ngesikhathi egijima ebuya ukuyobiza abagibeli abazogibela itekisi eliya edolobheni.
“Lo muntu ushone kade esemsebenzini ezamela abanikazi bamatekisi imali, kodwa usoseshini ayikho into ayenzile ukulekelela. Amalunga amabili kuphela kasoseshini afike ngisho emngcwabeni kamfowethu.
“Kubuhlungu futhi kunzima ngoba loku kuyakhombisa ukuthi abanandaba nathi abasikhathalele. Njalo uma ngabe sithi siphakamisa izikhalazo zethu basitshela ukuthi asiqashangwa ibona kodwa ithina esibalethela imali njalo,” kubeka yena.
Uthe into aba yifunayo bona ukuthi usoseshini ubanikeze isiqiniseko ukuthi uma ngabe kukhona okubehlelayo besemsebenzini bazi ukuthi bazonakekelwa. “Njalo uma ngabe kunemihlangano sithi siyakhuluma thina kuvele kuthiwe angeke size silalelwe engathi thina asibona abantu. Nathi siyafuna ukuthi sizwakalise izikhalazo zethu nezinto esingajabulile ngazo silalelwe sihlonishwe futhi nemibono yethu.”
Imizamo yokuthola i-South African Taxi National Association (Santaco) kanye nososeshini ayizange iphumelele.